🥇 ▷ Barnaamijka Gmail ayaa hada taageeraya talaabooyin deg deg ah lagusoo ogeysiinayo ✅
Barnaamijka Gmail ayaa hada taageeraya talaabooyin deg deg ah lagusoo ogeysiinayo
Google ayaa cusboonaysiisa barnaamijka Gmail ee macruufka iyadoo lagu daro astaamo xiiso leh
Waxaa laga heli karaa App Store, dukaanka app ee Apple, nooca cusub ee Codsiga boostada Google, Gmail loogu talagalay iPhone iyo iPad. Noocan cusub waxaan ku raaxeysan karnaa suurtagalnimada ficillada degdegga ah ee laga helo ogeysiiska, dirista faylasha laga helo barnaamijyada kale iyo waxyaabo kaloo badan. Baro dhammaan astaamaha noocaan cusub oo kala soo bixi hoos.
Muxuu yahay barnaamijka Gmail-ka ee aaladaha macruufka?
Codsiga rasmiga ah ee Gmail: emaylka Google ee loogu talagalay iPhone ama iPad, gebi ahaanba la cusbooneysiiyay oo gebi ahaanba BILAASH ku ah App Store, waxay ku siineysaa sida ugu wanaagsan ee Gmail, sida: ogeysiisyada waqtiga-dhabta ah, suurtagalnimada lahaanshaha akoonno fara badan iyo baarista sanduuqaaga oo dhan.
Thanks to dalabka Gmail ee uu soosaaray Google waxaad waxyaabo badan kuuguleyn kartaa akoonkaaga e-maylka si toos ah iPhone iyo iPad, iyo waxyaabo kale oo badan oo aad awoodid:
U beddelo koonto badan (5 ugu badnaan).
Hesho ogeysiisyo deg deg ah ee farriimaha cusub, oo ay la socdaan xulashooyinka xarunta ogeysiinta, buufinnada iyo qufulka shaashadda.
Si dhakhso ah ugu baar emaylkaaga oo dhan, imminka iyadoo saadaalinaysa sida aad u qoreyso.
U arag sawirrada astaanta guud ahaan qayb ka mid ah wadahadalka.
U aqri emailkaaga qaab wadahadalka.
U oggolow magacyada xiriiriyeha inay iskood u dhammaystiraan marka aad qoreyso (ka soo xiriir xiriiradaada Google ama taleefankaaga)
Kajawaab casumaadaha casumaada Google ka si toos ah codsiga.
Si toos ah uga aqriso ugana jawaab cinwaanada Google+ isdhaafsiga tooska ah ee arjiga.
Ku habeyso emaylkaaga howlo ku kaydiya, calaamad, muujiya, tirtira oo calaamadee sida spam.
Diro oo hel lifaaqyada
Ku habayn fariimaha adoo adeegsanaya doodahaaga.
Waxay u oggolaaneysaa inay lahaato dhowr akoon.
Naqshadaynta cusub ee dalabka ayaa si cad u cad.
Baadi saadaalinnada markaad qoreyso.
Bilaash aan xadidnayn ayaa ku jirta sanduuqa.
Jawaabaha khadka isugeynta ah ee loogu talagalay casumaadaha kalandarka Google.
Taageer dhajinta Google+ isdhaxgalka
Soo dhaweyn cusub
Waxa ku cusub nooca 4.0 ee barnaamijka Gmail: Google-ka Google
Cusboonaysiintaan waxay leedahay wararka soo socda:
Tallaabooyinka degdega ah: farriimaha u kaydso ama uga jawaab si toos ah ogeysiiska.
U dir faylasha barnaamijyada kale: lifaaq sawirro iyo dukumiintiyo Gmail adigoon ka tagin barnaamijyada aad jeceshahay.
Muuqaalka lifaaqa cusub: Ku fur lifaaqyada Gmail barnaamij kasta.
U soo degso Gmail-ka iPhone iyo iPad
Haddii aadan wali haysan Codsiga boostada Google ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, waxaad ku rakibi kartaa adiga oo maraya xiriirinta tooska ah ee soo dejinta, kana socota App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
Gmail: emaylka Google ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 7.1 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5, iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, AfriKaans, Jarmal, Bengali, Bokmål, Noorwiij, Bulgaariya, Kannada, Catalan, Czech, Shiinaha, Croatian, Danish, Slovak, Slovenian, Estonian, Basque, Filipino, Finnish, Faransiis, Ga, Galiiye, Griiga, Gujarati, Cibraaniga, Hindi, Hu, Indooniisiya, Ingiriis, Icelandic, Talyaani, Jabbaan, Ko, Latvia, Lithuaniyaan, Malayalam, Malays, Marathi, Holand, Noorwiij, Faarisi, Booland, Boortaqiis, Roomaani, Ruush, Serbian, Swahili, Iswidish, Thai, Tamil, Telugu, Turkish, Yukreeniyaan, Urdu, Fiyatnaamiis, Zulu, Carabi.